တရုတ်ကမ်းခြေစောင့်တပ်ဖွဲ့နှင့် ပါကစ္စတန်ပင်လယ်ရေကြောင်းလုံခြုံရေးအေဂျင်စီတို့ ပထမဆုံးအကြိမ် အဆင့်မြင့်အစည်းအဝေးပြုလုပ် - Xinhua News Agency
တရုတ်ကမ်းခြေစောင့်တပ်ဖွဲ့နှင့် ပါကစ္စတန်ပင်လယ်ရေကြောင်းလုံခြုံရေးအေဂျင်စီတို့ ပထမဆုံးအကြိမ် အဆင့်မြင့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်
ပေကျင်း၊ နိုဝင်ဘာ ၁၀ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်ကမ်းခြေစောင့်တပ် (CCG) နှင့် ပါကစ္စတန်ပင်လယ်ရေကြောင်းလုံခြုံရေးအေဂျင်စီတို့သည် ၎င်းတို့၏ ပထမဆုံးအဆင့်မြင့်အစည်းအဝေးကို ဗီဒီယိုလင့်ခ်မှတစ်ဆင့် ကျင်းပခဲ့ပြီး နှစ်ဖက်စလုံးက ပင်လယ်ရေကြောင်းဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ကတိပြုခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်ကပြုလုပ်သော ၎င်းတို့၏ အွန်လိုင်းမှ တွေ့ဆုံမှုအတွင်း နှစ်ဖက်စလုံးသည် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှ အကျိုးကျေးဇူးများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ကာ အနာဂတ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် ဦးတည်ချက်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး အပြန်အလှန်စိုးရိမ်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို အမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြကြောင်း CCG ၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
နှစ်နိုင်ငံ သံတမန်ဆက်ဆံရေး ထူထောင်ခြင်း နှစ် ၇၀ ပြည့် နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနားကို ကျင်းပရန် နှစ်ဖက်စလုံးက ကတိပြုကြပြီး ရေကြောင်း ဥပဒေ စိုးမိုးရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရန်နှင့် ကံကြမ္မာအကျိုးတူ ပင်လယ်ရေကြောင်း အသိုက်အဝန်း တည်ဆောက်ရေးကို အတူတကွလက်တွဲမြှင့်တင်ရန် ကတိပြုခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
BEIJING, Nov. 10 (Xinhua) — The China Coast Guard (CCG) and the Pakistan Maritime Security Agency have held their first high-level meeting, via video link, with both sides vowing further cooperation for maritime law enforcement.
Both sides have vowed to take the opportunity of celebrating the 70th anniversary of the establishment of diplomatic relations between China and Pakistan and work together to promote maritime law enforcement cooperation and advance the building ofamaritime community withashared future. Enditem